Luis Enrique oo ku tilmaamay David de Gea inuu yahay kan ugu fiican aduunka – Gool FM
Luis Enrique oo ku tilmaamay David de Gea inuu yahay kan ugu fiican aduunka
(Spain) 09 Sept 2018. Macalinka xulka qaranka Spain ee Luis Enrique ayaa amaan kala dul dhacay goolhaaye David de Gea, kadib bandhigii cajiibka ahaa u sameeyay kulankii xalay ay guusha ka gaareen England.
Xulka Spain ayaa ku booqday dhigiisa England garoonka Wembley si ay u wada ciyaaraan kulan ka tirsan UEFA Nations League, wuxuuna Luis Enrique oo kulankiisii ugu horeeyay guul gaaray ayaa wuxuu ku amaan de Gea badbaadinadii faraha badnaa uu kulankan ka sameeyay.
“Aad ayaan u faraxsanahay, laakiin waxaa wali jira waxyaabo badan aan dooneyno inaan saxno, balse waxa ugu wanaagsan ayaa ah in inta kulanka uu socday aan sameenay fursado badan, sababtoo ah waxaan isku dayeynay inaan gool dhalino, waxaana rajeenayaa inaan sidaan sii ahaano”.
“Waligey kama aanan shakinin awooda David de Gea, waxaa laga yaabaa inuu qaladaad sameeyo sida ciyaartoyda kale, laakiin waa ciyaaryahan cajiib ah, xili ciyaareedyadii uu kusoo sugnaa England, wuxuu soo ahaa kan koowaad ee caalamka”.
Sida ay degmooyinka isugu beegmeen wareega siddeeda iyo afar dhamaadka (Jadwalka oo dhamaystiran)
Djibril Cissé oo ka hadlay doorka weyn ee Gerrard uu ka qaatay mucjisadii Istanbul ee 2005